Dowladda Soomaaliya oo beenisay in Al-Shabaab joojiyeen dayactirka lagu waday Stadium Muqdisho | Xaysimo
Home War Dowladda Soomaaliya oo beenisay in Al-Shabaab joojiyeen dayactirka lagu waday Stadium Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in Al-Shabaab joojiyeen dayactirka lagu waday Stadium Muqdisho
Dowladda soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in Al-Shabaab ay joojiyeen dhismaha iyo dayactirka lagu waday garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho.
Garoonka Stadium Muqdisho waxaa galabta booqday ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo ay wehlinayeen wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha Khadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka warfaafinta Maareeye iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish iyo ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasada Maxamed Cabdullaahi Tuulax.
Maareeye ayaa sheegay inaysan jirin cid joojin karta shaqada ka socota garoonka.
Maareeye ayaa sheegay inuu warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dadka uu ugua digayo baahinta warar uu sheegay inay yihiin been abuur.
Maareeye waxa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay baaritaano ku sameyn doonaan shirkadda heysata qandaraaska dhismaha, isla markaana ay wax ka weeydiin doonaan arrimhaasi.
Maadaama Shabaab aysan markii horeba awood ciidan oo ay garoonka ku qabsadeen ku joojin dayactirka, tagitaanka xubnaha dowladda ee garoonka caddeyn uma noqon karaan inaan la joojin, waxaana lagu kala ogaan doonaa sida ay shaqada u socoto maalmaha soo socda.